नक्सा जारी गरेपछि बाँकी कामको लागि सरकारले देखाएन हतारो, भारत झनै मौन…हेर्नुहोस् । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काठमाडौं : कालापानी सहितको नक्सा जारी गर्ने बेला नेपालका राजनीतिक द’लहरु एक’जुट बने । बन्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो, आफ्नो भू’मि फि’र्ता ल्याउन बढ्दो जनद’बाब । तर, नक्सा जा’रीपछि नेपालले भारतले अति’क्रमण गरेको जमिन फि’र्ता ल्याउन खासै पहल गर्न सकेको छैन ।
बरु सत्ता’रुढ नेकपा आफ्नै किच’लो अलम’लिएको छ । सीमा सम्बन्धी विषयमा दुई सय वर्षपछि नेपालले पू’र्ण नक्सा जारी गरेर एक कदम अघि बढाएको त छ, तर भू’मि फि’र्ता ल्याउन ठो¥स क’दम चाल्न सकेको छैन । भारत सहजै वा’र्ताका लागि आउँछ भन्ने विश्वास पनि देखिदैन ।
नेपाल र भारतका प्राथतमिकता फरक–फरक छन् । भारतले निरन्तर नेपाली भू’मि अ’तिक्रमण जारी राखेको छ । पछिल्लो उदाहरण कञ्चनपुरको बेलौ’री नगरपालिका पनि हो । भारतले स्ट्रिप नक्साका आधारमा भू’मि आफ्नो भएको दा’बी गर्दै आएको छ ।
उ १८२ स्थानमा स्ट्रि’प नक्सामा हस्ता’क्षर गर्नुपर्ने प्रस्ता’व राख्छ । तर, नेपालका लागि यो घा’टाको विषय हो । यदी भारतको प्रस्तावमा नेपाल तयार भए नेपालले आफ्नो भू’मि गु’माउनुपर्छ । नत कालापानी, सुस्ताकै विषयमा भारत नेपालसँग वा’र्ता गर्न तयार छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त प्रा’विधिक समितिले सन् २००७ मा दुईवटा सिफा’रिस गरेको थियो । नेपाल–भारत संयुक्त प्रावि’धिक समितिको सिफारिसः
१.बि’ग्रेका सीमा’स्तम्भ निर्माण, मर्मत’सम्भार तथा द’शगजा अति’क्रमण हटाउन वा’उन्ड्री व’र्किङ ग्रुप
२.कालापानी र सुस्ताको विषय समा’धान गर्न पर’राष्ट्र सचिवस्तरीय सं’यन्त्र निर्माण गर्ने
पर’राष्ट्र सचिवस्त|रीय संयन्त्र त सन् २०१४ मा मात्रै बन्यो । फरक फरक प्राथमिकता भएकाले वार्ता भने हुन सकेको छैन । नेपाललाई वा’र्ताको हतारो छ तर भारत ध’केल्न चाहन्छ ।
अहिले सत्ता’रुढ नेकपाको कि’चलोले भारतलाई हाइ’सन्चो बनाएको छ ।
आन्त’रिक समस्या’मा फँसेको नेपालले अहिलेकै अवस्थामा भारतसँग आफ्नो जमिन फि’र्ता ल्याउन सक्दैन । भारतसँग नेपालले सीमा सम्बन्धि कुनै सन्धी गरेको छैन । सन् १८१६ सुगौ’ली स’न्धि र त्यसको व्याख्या रहेको १८६० को सन्धि मात्रै छ, त्यो तत्कालिन इ’ष्ट इण्डिया सरकारसँग गरिएको हो । तर, हालको स्वत’न्त्र भारतसँग कुनै सन्धि भएका छैनन् ।
भारतसँग भएका सीमा सम्ब’न्धी वा’र्ताः
१. सन् १९७५ पछि सीमासम्बन्धी वार्ता सुरु
२. सन् १९८३ मा सं’युक्त प्रा’विधिक समिति बन्यो
३. संयु’क्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ सम्म काम ग¥यो र बनायो स्ट्रि’प नक्सा ९नेपालको असह’मति०
नेपालको २६ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । र, नेपाल भारतबिच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सी’मारेखा छ । त्यसमध्ये २३ जिल्लामा सीमा विवाद छ । धनुषा, बैतडी र डडेलधुरा, कञ्चनपुरमा मात्रै वि’वाद छैन । नेपाल–भारत सीमारेखाको ७१ स्थानमा अति’क्रमण, मिचान र वा’दवि’वाद छ । News24 Nepal
Previous नेपाल-चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन तयार छौं : चिनियाँ राष्ट्रपति सी
Next पुन: शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति बनेमा काङ्ग्रेस पार्टी स,माप्त हुन्छ : सुजाता कोइराला…हेर्नुहोस!
40 seconds ago मेचीमहाकाली संवाददाता